AgriTourism - पारिवारिक यात्रा | सेमोर, IN | ज्याक्सन काउन्टी आगन्तुक केन्द्र
सेप्टेम्बर 18, 2021 812.524.1914
पतन उत्सव र घटनाहरु
यो आत्म-निर्देशित ड्राइभ यात्रा "जीवित फार्महरू" र उनीहरूलाई हाम्रो काउन्टीको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मध्येको एक बनाउन श्रद्धांजलि हो। तपाईंले सब भन्दा आधुनिक खेतीपाती अपरेसनदेखि यटेरियरको विचित्र सानो परिवारको फार्म सम्म अनुभव गर्नुहुनेछ। त्यहाँ धेरै जनावरहरू खेत र तिनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानमा अवलोकन गर्नेछन्। केही धेरै सुन्दर भिस्टा र ड्राइभहरू जैक्सन काउन्टीको यस भागमा उपलब्ध छन्।
भ्रमण केही घण्टामा पूरा गर्न सकिन्छ वा यो तपाईंको आगाडि र तपाईं कति लामो यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ त्यसमा आधा दिन लिन सक्दछ।
ड्राइभि tour टुर जानकारी डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
Stuckwish फार्म मार्केट
4683 135 एस स्टेट रोड १XNUMX, भलोनिया
जैक्सन काउन्टीमा पारिवारिक फार्मको लामो इतिहास छ र स्टेट रोड १ Brown7 मा ब्राउनस्टोनबाट miles माईलको दूरीमा अवस्थित छ। फसलको समयमा हाम्रा सबै ताजा स्थानीय उत्पादनहरूको आनन्द लिन हाम्रो बजार भ्रमण गर्नुहोस्। हामी तपाईंको परिवारको टेबलको लागि सबैभन्दा नयाँ र उत्तम उत्पादनहरू प्रदान गर्नमा गर्व गर्दछौं। ताजा, स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको उत्पादनबाट स्थानीय मह र जाममा, हामीले तपाईंको कभर गरेका छौं। हामी हाम्रो समुदायबाट स्थानीय शिल्प र घर सजावट वस्तुहरू पनि बोक्छौं। रोक्नुहोस् र हामीसँग भ्रमण गर्नुहोस् र जैक्सन काउन्टी, इण्डियाना के बारे मा छ आनंद गर्नुहोस्।
वेबसाइट भ्रमण गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
ह्याकम्यान परिवार फार्म मार्केट
6077०135 S. एस स्टेट रोड १812, भलोनिया, 358१२-3377--XNUMX,, ग्रीष्म throughतु हुँदै।
परिवारको संचालन फार्म मार्केटको प्रतीक हो, सडकको फार्म बजारबाट आशा गर्ने सबैको प्रस्ताव। मकै, कद्दू, टमाटर, हरियो सिमी, क्यान्टलाप र स्थानीय रूपमा उत्पादन गरिएको मह पनि बजारमा उपलब्ध छ, जुन ह्याकम्यान परिवार र साथीहरूको पुस्ताले चलाउँछन्। भल्लोनिया र सलेमको बीचमा अवस्थित फार्म मार्केट ब्राउनटाउनबाट १० माईल टाढा छ तर ड्राइभको लायक छ।
टाइमेयर फार्म मार्केट
3147१300 एस काउन्टी रोड W०० डब्ल्यू।, भलोनिया, 812१२-358--5618१।।
मौसममा बारम्बार र वार्षिकका लागि राम्ररी परिचित छ, लौरा, कद्दू र स्क्वास र इनडोर मार्केटको एक विशाल प्रकार जुन फलहरू, तरकारीहरू, क्यान्डी, जेलीहरू र आइटमहरू फेला पार्न धेरै गाह्रो हुन्छ। पूर्ण सेवा रेस्टुरेन्टले अतिथिहरूको सेवा गर्दछ र ब्रेकफास्ट, खाजा, बेलुका र पिज्जाको प्रस्ताव गर्दछ! बजारले सबैको लागि केहि प्रदान गर्दछ, आड़ू र गर्मी स्क्वाश देखि zucchini, टमाटर, खरबूजा र भैंसी र gourds को लागी। त्यहाँ सानो पेटिंग चिडियाखाना र लघु गोल्फ कोर्स पनि छ। ताजा काटिएको क्रिसमस रूखहरू र बिदाका लागि प्रस्ताव राखिएका ताजा मालाहरू।
Seymour क्षेत्र किसानको बजार
वालुनट स्ट्रिट पार्किंग लोट, सेमोर, अक्टुबर मार्फत
उत्पादन र सबै प्रकारका सामानहरू शहर सीमोरमा मौसमी किसान बजारमा स्वागत छ। "मार्केटलाइट" सोमबार दिउँसो २ देखि साँझ2सम्म र बुधवार बिहान6देखि दिउँसो Spring देखि वसन्तदेखि झर र अक्टूबरमा शनिबार बिहान 8 देखि दिउँसो आयोजित गरिन्छ। पूर्ण बजार बिहान 8 देखि दिउँसो, मेदेखि सेप्टेम्बर सम्म आयोजित हुनेछ। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिवार, जून देखि सेप्टेम्बर, खाना पनी प्रदर्शन, बच्चाहरूको गतिविधि, संगीत र अधिकको साथ विशेष बजार शनिवार हुनेछ।
ब्राउनटाउन इविंग मुख्य सेन्ट फार्मर्स मार्केट
हेरिटेज पार्क, काउन्टी अदालतको नजिक, जूनदेखि अक्टोबर
उत्पादन र सामानहरू ब्राउनटाउनको अदालत कक्षमा स्वागत छ। बजार हरेक शुक्रबार बिहान9देखि जुन १ देखि अक्टुबर सम्म एक बजे सम्म आयोजित गरिन्छ।
क्रिर्सभिले किसानको बजार
१०० वेस्ट हावर्ड स्ट्रीट
उत्पादन र सामान स्वागत छ। बजार प्रत्येक शनिबार बिहान9देखि दिउँसो सम्म आयोजित गरिन्छ। 812-390-8217 कल गर्नुहोस्।
5875 E. Co Rd 875N।, Seymour, सडक छेउको उत्पादन स्ट्यान्ड।
VanAntwerp को फार्म मार्केट
१११11181१ N. युएस 31१, सेमोर, 812१२-521२१--9125 १२XNUMX, सडक छेउको उत्पादन स्ट्यान्ड।
यो बजारले वेष्ट टिपटन स्ट्रिटमा सडक स्ट्यान्ड पनि देखाउँदछ।
लट हिल डेयरी फार्म
१००२10025 N. Co. Rd। 375 812 ई।, सेमोर, 525१२-8567२XNUMX-XNUMX,, www.lothilldairy.com
परिवारको स्वामित्वमा दुग्ध फार्म, सेतो र चकलेट दुधको साथ एक स्प्रेड पनीर सहित पनीरको विभिन्न किसिमको बनाउने। Gelato विभिन्न स्वादहरू मा पनि उपलब्ध छ ... सबै दुग्ध गाईको आफ्नो शेयर बाट दूध बाट बनेको। आईटमहरू स्थानीय किसानको बजारमा र उनीहरूको सम्पत्तीमा फार्म स्टोरबाट बेचिन्छ।
पल्मर र बोवर्स फर्मस्टेड
4454 800 E. Cod Rd। 812N।, सेमोर, 216-4602-XNUMX.
यो १1886 same एउटै परिवार फार्म पारम्परिक प row्क्ति बाली अपरेसनबाट सबै प्राकृतिक, पोषक-घना उत्पादन मेशीनमा रूपान्तरण हुँदैछ। उपलब्ध फार्मस्टेट सामानहरूमा घाँस-फेड, घाँस-परिणत गोमांस, चराएको अण्डा, सम्पूर्ण गहुँको पीठो र पपकोर्न समावेश छ।
4160१925० पूर्वी काउन्टी रोड XNUMX २XNUMX एन, सेमोर
एक्वापोन स्थानीय हरितगृह हो। यस फार्मले साग र tilapia स्थानीय स्टोर, व्यवसाय, र ग्राहकहरु लाई प्रदान गर्दछ।
रोलिंग हिल्स लभेंडर फार्म
4810१925० पूर्वी काउन्टी रोड XNUMX २XNUMX एन, सेमोर
यस फार्मले बढ्दो गुणस्तरको अभूतपूर्व र मुन्स्टेड ल्याभेन्डरमा Cortland, IN मा पारिवारिक फार्ममा गर्व गर्दछ। ल्याभेन्डर कृषिको सपना २०१ 2018 मा शुरू भयो र अब तिनीहरूको भूमि २,००० भन्दा बढी ल्याभेन्डर बिरुवाहरूको घर छ। २०२० मा, बन्डलहरू खरीद गर्न उपलब्ध हुनेछ।
वाइनरी / ब्रुअरीज
चाटेउ डि पिक वाइनरी र ब्रुअरी
चाटेउ डि पिकले चख्खा माठा र रिसेप्शन क्षेत्र एक भव्य पहाडी कोठामा देखाउँदछ। चखने कोठाले हप्ताको सात दिन नि: शुल्क मदिरा चाख्न प्रस्ताव गर्दछ। दुबै सेता र रातो अpes्गुरको तीन एकड जमिनमा थोप्ला र वाइन सूची करीव २ varieties प्रकारका समाहित गर्दछ, रियालिlingदेखि सेमी-स्वीट्सदेखि स्वीट पोर्टसम्म। र अर्को पटक तपाईं भ्रमण गर्दा चाटो डी पिक बियर प्रयास गर्न नबिर्सनुहोस्! चाटेउ डि पिकसँग यस क्षेत्रमा भूउपग्रह स्टोरहरू छन्।
चाटेउ डी पिक 6361 760१812 उत्तर काउन्टी रोड 522० पूर्व, सेमोर, 9296१२-XNUMX२XNUMX-XNUMX २। XNUMX मा स्थित छ।
साल्ट क्रिक वाइनरी
साल्ट क्रिक वाइनरी २०१० मा ली परिवारको एक शौकको रूपमा शुरू भयो। वाइनरी दक्षिणी इन्डियानाको रोलिंग पहाडहरूमा अवस्थित छ र हूसीर राष्ट्रिय वनको सिमानामा छ। अpe्गुर वाइनसँगै, लीले ब्लूबेरी, स्ट्रबेरी, चेरी, नाशपाती, प्लम र जंगली ब्ल्याकबेरीबाट पनि वाइन उत्पादन गर्छ। साल्ट क्रिक वाइनरीले एक मर्लोट, क्याबरनेट सौविनोन, चम्बोर्सिन, रिजलिling, सूर्यास्त रातो, ब्ल्याकबेरी, क्लासिक सेतो, जंगली ब्ल्याकबेरी, प्लम, ब्लूबेरी, आम, आड़ू, मस्काटो, मीठो रातो, मीठो सेतो, क्याटावा र रातो रास्पबेरी उत्पादन गर्दछ।
साल्ट क्रिक वाइनरी 7603०925 वेस्ट काउन्टी रोड 812२497 उत्तरमा फ्रेटाउनमा अवस्थित छ। 0254-XNUMX-XNUMX।
सिमर बियरिंग कम्पनी
सेमोर ब्रुइ Company कम्पनी सीमोरको पहिलो अपरेटिंग ब्रुवपब हो। रोक्नुहोस् र पिन्टको लागि प्रयास गर्नुहोस् वा तपाईंको ग्रोभर भर्नुहोस्। ब्रुउपबमा समय-समयमा लाइभ संगीत आयोजित गरियो र, जब मौसम राम्रो छ, नजिकैको हार्मोनी पार्कमा धुनहरूको आनन्द लिनुहोस्। कलाकारहरूको पूर्ण तालिका गर्मीको समयमा देखा पर्दछ। विभिन्न बियर ट्यापमा छन्। ब्रूकलिन पिज्जा कम्पनीमा अवस्थित
सेमोर बियरि Company कम्पनी 753 812 वेस्ट दोस्रो स्ट्रीट, सेमोरमा अवस्थित छ। 524१२-8888२XNUMX-XNUMX।
ड्रिफ्टवुड राज्य फिश ह्याचेरी
१ 1930's० को दशकको अन्तमा वर्क्स प्रोजेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन (डब्ल्यूपीए) अन्तर्गत निर्माण गरिएको यस न्यानो पानी सुविधामाeमाटा पालन पोखरी र १ फलफूल समात्ने पोखरी रहेको छ। पालना पोखरी ०..9 देखि २.० एकड आकारमा छ र माछा जुटाउनको लागि कुल ११. acres एकर प्रदान गर्दछ। यस सुविधाले २ 1,००० दुई इन्च बास, २०,००० चार इन्च लार्जमाउथ बास र ,,0.6०० च्यानल क्याटफिस बढाउछ, जुन इन्डियानाको धेरै सार्वजनिक पानी भण्डार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
(इन्डियाना DNR द्वारा प्रदान गरिएको)
ड्राइफ्टवुड राज्य फिश हैचरी 4931 250१812 दक्षिण काउन्टी रोड २ West० पश्चिम, भलोनिया, 358१२-4110-XNUMX११० मा अवस्थित छ।
भल्लोनिया नर्सरी, वन विभाग
नर्सरी मिसन विकास र इन्डियाना जग्गामालिकहरु लाई संरक्षण को लागी उच्च गुणस्तरको बोट बिरुवाहरु को वितरण गर्न हो। साढे चार लाख बिरुवा 60० बिभिन्न प्रजातिहरूबाट प्रति वर्ष उब्जाउँछन्। २ ac० एकर सुविधा दुबै कन्निफर र हार्डवुड उत्पादन गर्दछ।
भल्लोनिया नर्सरी, वन विभाग को शाखा २ .2782२ वेस्ट काउन्टी रोड 540० दक्षिण मा भलोनियामा अवस्थित छ। 812-358-3621
स्नाइडर नर्सरी, Inc.
बचपनदेखि नै जर्ज स्नीइडरको एउटा महत्वाकांक्षा थियो grow रूखहरू बढाउनु आफ्नो वरपरको सौन्दर्य बढाउन। जर्जले जमिनको सानो जमिनमा रूखहरू र झाडीहरू खेती गर्न शुरू गरे जुन उसले आफ्ना बाबुआमाको कुखुराको ह्याच्रीबाट लिएको थियो र फार्म उत्पादन गर्दछ।
उच्च माध्यमिक विद्यालय पछि, जर्जले माए एलेन स्नाइडरसँग विवाह गरे। उनी र तिनकी श्रीमतीले परिवार फार्मबाट २ acres एकड जमिन किने र एउटा रिटेल नर्सरी – स्नाइडर नर्सरी स्थापना गरे।
हाल नर्सरी 500०० एकड भन्दा बढी जग्गामा रहेको छ र दक्षिणी इन्डियानाको सबैभन्दा ठूलो नर्सरी हो। स्नाइडरले दुबै थोक र खुद्रा ग्राहकहरूलाई ल्याण्डस्केपि। र बगैचा बिरूवाहरू बेच्छ।
स्नेइडर नर्सरी, Inc. 3066० US50 पूर्वी अमेरिकी 812.522.4068०, सेमोरमा अवस्थित छ। XNUMX।
हामी अहिले नजिकै छैनौं। तर तपाईं हामीलाई एक इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ र हामी तपाईंलाई फिर्ता आउनुहुनेछ।
पठनीय छैन? पाठ परिवर्तन गर्नुहोस्।